कोरोनाबाट बच्न प्रयोग गर्नुस् यस्ता आयुर्वेदिक औषधि – Bikash Khabar
Featured Slider Top News विचार स्वास्थ्य
आइतबार, १९ बैशाख २०७८ गते ९:४७ मा प्रकाशित	Author विकास खबर संवाददाता	Comment(0)	212 Views
काठमान्डाैं,१९ वैशाख। कोरोना (कोभिड–१९) सङ्क्रमणको दोस्रो लहरले आतङ्कित भएको बेला रोग लाग्नै नदिने उपायतिर धेरैको ध्यान गएको छ । शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन खानपान, जडीबुटी र आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोगमा जोड दिन आयुर्वेद चिकित्सकहरूको सुझाव छ । यसका लागि जडीबुटीबाट बनेका आयुर्वेदिक औषधि सेवन गर्न राजधानीको नरदेवीस्थित केन्द्रीय आयुर्वेद चिकित्सालय निर्देशक डा. प्रदीप केसी जोड दिन्छन् ।
यस मिश्रणमा भाइरसजन्य रुघाखोकी, सिजनल फ्लु, ज्वरो आउने, घाँटी दुख्ने, अरुचि, गन्धनाश हुने आदि लक्षणलाई निर्मूल पार्न चाहिने सक्रिय तत्वहरू रहेको कुरा वैज्ञानिक अनुसन्धानमा नै देखिएको डा. केसीको भनाइ छ । कोरोना सङ्क्रमित भएका र सङ्क्रमण नभएका सबैले यो उपाय अवलम्बन गर्न आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवीले सार्वजनिक रूपमा समेत आह्वान गरेको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ । याे समाचार गाेरखापत्रबाट
कैलाली,२५ जेठ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठक सुरु भएको छ । प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनका लागि
काठमाडौं,०२ जेठ । अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले वैशाख ६ गतेबाट आफ्ना लगानीकर्तालाई धमाधम हकप्रद सेयर बिक्री गरिरहेको छ । उक्त
लक्षण देखिएका विरामीको नमूना परीक्षण गराउन कठिन
धनगढी,२० वैशाख। आज बिहान धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पताल पुग्दा कोरोना परीक्षण गराउन चाहनेको लामो लाइन थियो । हल्का ज्वरो र